Duufaanta Xagibis: astaamaha, samaysanka iyo khatarta | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 20/04/2021 10:43 | Duufaannada
Waan ognahay in duufaanada kuleylaha ay si dhaqso leh u sii xoogeysan karaan. Qaar badan oo ka mid ahi waxay leeyihiin qaybo ka kooban 5 ama wax la mid ah. Markay duufaanta kuleylka ahi gaarto qaybahan waxaa lagu yaqaan magaca duufaanno ama duufaanno. Qaar badan oo ka mid ahi waxay muujinayaan il yar oo si fiican loo qeexay oo is haysta oo si muuqata u muuqata, gaar ahaan sawirrada dayax gacmeedka iyo raadaarka. Badanaa waa astaamaha lagu garto awooda duufaanka kulaylaha. Maanta waxaan ka hadlaynaa Duufaanta Xagibis, maadaama uu ahaa mid qaas ah marka loo eego ishiisa iyo tababarkiisa.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Duufaanta Xagibis, astaamaheeda iyo sameyskeeda.
2 Xoojinta weyn ee duufaanta Xagibis
Haddii aynaan tixraacin duufaannada iyo duufaannada, kuwani waxay asal ahaan ka kooban yihiin 3 qaybood: isha, derbiga indhaha iyo xirmooyinka roobka. Markaan ka hadlayno isha duufaanta, waxaan ka hadlaynaa bartamaha duufaanta kulaylaha ee nidaamka oo dhami wareegayo. Celcelis ahaan, isha duufaanta badiyaa qiyaastii waa 30-70 kiilomitir dhexroor. Xaaladaha qaarkood waxay gaari kartaa dhexroor weyn, in kastoo aysan ahayn tan ugu badan. Kaliya kuwa duufaannada waaweyn ee kuleylaha ah ayaa sameeya. Waqtiyada kale, waxaa laga yaabaa inaan leenahay isha loo yareeyay dhexroor yar yar oo isafgarad badan. Tusaale ahaan, Duufaanta Carmen waa inay yeelataa isha 370 kilomitir, iyadoo ah tan ugu weyn ee la diiwaan geliyay, halka Duufaanta Wilma ay yeelatay hal il oo kaliya oo 3.7 kiilomitir ah.
Qaar ka mid ah duufaannada iyo duufaannada firfircoon waxay soo saaraan waxa loogu yeero isha kirada ama isha madaxa la kireeyo. Waxay dhacdaa markii isha duufaanta kulaylaha ay aad uga yar tahay sidii caadiga ahayd. Tani waa waxa ku dhacay Typhoon Hagibis sannadka 2019. Isha yar waxay ka dhigeysaa duufaanta mid xoog badan iyada oo duufaanta isha ku hareeraysan ay aad u dheereyso. Duufaannada kulul ee kuleylaha ee leh isha kirada badanaa waxay abuuraan isbedbeddel xoog leh oo ku yimaada xooga sare sababo la xiriira dabaylaha la xiriira.
Waxaa ka mid ah astaamaha Duufaanta Xagibis waxaan helnaa cabirkeeda mesoscale. Tan macnaheedu waa inay tahay duufaan ay adagtahay in la sii saadaaliyo marka loo eego dhanka dhabbaha iyo xooga dabaysha. Muuqaal kale oo astaamo u leh Typhoon Hagibis, marka lagu daro indhaheeda duufaanka, waa derbiga isha iyo kooxo roobab oo matalaya dhammaan qaybaha muhiimka u ah duufaanta. Ugu dambeyntiina, xirmooyinka roobka waa daruurahaas oo sameysmaya duufaanno kuna wareegaya derbiga isha. Badanaa dhererkoodu waa boqolaal kilomitir waxayna aad ugu tiirsan yihiin cabirka duufaanka guud ahaan. Kooxuhu waxay wareegayaan saacad kasta marka aan ku suganahay dhanka woqooyi waxayna sidoo kale u muuqdaan inay wataan dabeylo xoog badan.
Xoojinta weyn ee duufaanta Xagibis
Mid ka mid ah kiisaska ugu khaaska ah taariikhda tan iyo markii la sameeyay duufaanno iyo duufaanno waa duufaanta Hagibis. Waa duufaan culus oo soo martay waqooyiga jasiiradaha Mariana oo ku taal Badweynta Baasifiga Oktoobar 7, 2019. Waxay sii martay jasiiraddan sida Qeybta 5 duufaanka kuleylaha ah oo ay weheliso dabaylo aad u xoog badan oo amar ah 260 kilomitir saacaddii.
Waxa inta badan taagnaa duufaantaan waxay ahayd heerka ay si kadis ah u sii xoogeysatay. Waana inay leedahay heer xoojin oo duufaanno kooban ay gaareen. Waxay ku dhacday 24 saac gudahood inay yeelato dabaylo 96 km / h ah inay yeeshaan dabaylo 260 km / h. Kordhinta xawaareygan ugu badan ee dabaylaha joogtada ahi waa nooc aad u dhif ah oo deg deg ah oo ah xoojin.
Illaa iyo hadda, Qeybta Cilmi-baarista Duufaanta ee NOAA waxay liis garaysaa kaliya hal duufaan oo ka dhacday Woqooyi-Galbeed ee Baasifiga taas oo dhacday: Super Typhoon Forrest ee 1983. Maanta, wali waxaa loo arkaa duufaanta ugu xoogan adduunka. Maxaa inta badan ka muuqda cabirkaan weyn laakiin isha yar ee wareegaya bartamaha iyo hareeraha isha weyn sidii ay gudaha ugu xanniban tahay. Waqti ka dib, dhexroorka isha duufaanka ayaa cabiray 5 mayl-badeed, halka isha labaad ay qabatay.
Isha duufaanta waxay ka dhigan tahay bartamaha duufaan celcelis ahaan uusan helin inay aad u weynaato, waxaana loogu yeeraa isha cirridka. Maalmo ka dib markii la aasaasay, waxay la xiriirtay jasiiradda Anatahan ee aan la degganayn waxayna ka guurtay Micronesia. Way daciiftay markay woqooyi u dhaqaaqday, qiyaastii toddobaad kadib waxay isu rogtay duufaan Qaybta 1-2 markay gaadhay Japan. Magaca Xagibis macnihiisu waa xawaaraha Tagalog, markaa magaceeda.
Waxaa loo tixgeliyey dhacdadii ugu xumeyd ee ka dhacda meeraha tan iyo saacado gudahood waxay ka soo kacdey duufaan aad u fudud oo duufaan ah oo u gudubtey duufaanta heerka 5. Waa isbeddelka ugu dhakhsaha badan ee abid dhaca, waana mid ka mid ah kuwa ugu awoodda badan awoodeeda . Adoo ku xisaabtamaya madaxa kirada waxay ka dhigtay duufaan runtii khatar badan.
Abuuritaankeeda, sida duufaanta inteeda kale, waxay ka dhacday badweynta dhexdeeda. Waan ognahay in hoos u dhaca cadaadiska awgood, hawadu ay u egtahay inay buuxiso farqiga udhaxeeya hoos u dhaca cadaadiska. Mar ay duufaantu wax ku quudato badda dhexdeeda oo ay gaarto dhul weynaha, mar dambe ma lahan waddo ay nafteeda ku quudiso iyo in ka badan, sidaa darteedna waxay lumisaa xoog markii ay soo galayso. 1983 Forrest super Typhoon, in kasta oo ay lahayd xawaare isku mid ah, hadana way ka tabar yaraatay sababo la xiriira isku indho la aan.
Isbadalkan wax badan ayaa laga qabtay astaamahiisa aan caadiga ahayn. Sawirada dayax gacmeedka la helay waxay muujiyeen inay leeyihiin il aad u yar oo ku jirta mid ka weyn. Labaduba waa la isku dhajiyay iyaga oo dhalinaya il ballaaran waxayna kordhiyeen awoodeeda. Sida caadiga ah, duufaannada oo dhami waxay leeyihiin il dhexroorkeedu ku xiran yahay xoogga ay leedahay. Hadday ka yar tahayna waa ka khatar badan tahay.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan kaga baran karto Duufaanta Xagibis iyo astaamaheeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta Xagibis
Taariikh nololeedka iyo ka faa'iideysiga Schrödinger